Script Bash: Xakamaynta Gudbinta Xadka Isgaarsiinta Toos ah | Laga soo bilaabo Linux
Script Bash: Xakamaynta Gudbinta Xayeysiiska Gudbinta Tooska ah
Joaquin | | GNU / Linux, Lagu taliyay
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Tani waa qormadaydii labaad. Inta badan ma qoro qoraalo illaa aan haysto wax wanaagsan oo aan la wadaago mooyee markan waxaan haystaa wax hubaal in qaar badani xiisaynayaan.
Dhowr bilood ka hor waxaan ka fekerayey inaan sameeyo qoraal aan ku xaddidayo ballaadhinta codsiyada, laakiin waxaan la kulmay dhibaatooyin iyo khaladaad igu adkayd aniga, sidaa darteed waxaan shaki ka galiyay Forum de <º Laga soo bilaabo Linux waaba intaasoo qof fikrad qabaa.
Markaa xoogaa waan iskaga tagay oo maalin maalmaha ka mid ah ayaan go’aansaday inaan dib u bilaabo qoraalka. Tijaabooyin badan ayaan sameeyay, waxbadan ayaan ka aqriyay bash, madax xanuun ayaa i hayay xilliyada aan firaaqada yahay, laakiin waan sameeyay !!
Aad baan ugu qanacsanahay sidaa darteed waxaan go aansaday inaan idinla wadaago qoraalkeyga yar si aad u isticmaasho oo aad u sii wanaajiso. Waxaan qorsheynayaa inaan ruqsad ka siiyo GPLv3, laakiin waa mashruuceygii ugu horreeyay sidaa darteed ma hubo sida loo sameeyo tan (Waxaan talo uga baahanahay ciddii horay u sameysay).
Hagaag, hada waan sharixi doonaa baahidaydu waxay ahayd iyo wixii aan ku xaliyay dhibaatada.
Waxaan hayaa qorshe Internet ah 512Kbs, sidaa darteed waan isticmaalaa Gudbinta sida macmiilka BitTorrent inuu u soo dejiyo faylal waaweyn (sida LibreOffice iyo qaar ka mid ah GNU / Linux distros). Xawaarahaas ayay soo dejintu waqti dheer ku qaadataa dhibaataduna waa marka la isticmaalayo biraawsarka webka Firefox: qaadataa waqti dheer
Markii aan ku xirnaado internetka, waxaan dhaqaajiyaa gudbinta gudbinta iyo soo dejinta xadka waqtiga oo waxaan sugaa Firefox inuu soo raro, ka dibna mar labaad ayaan bilaabaa durdurrada. Sida aad arki doonto, sidan sameyso dhowr jeer waa caajis. Ma aha in aan xuso in mararka qaar aan si toos ah u joojiyo dhammaan durdurrada ka dibna aan illaawo in aan mar kale shido, taas oo u horseedaysa waqti qiimo leh oo ku lumay soo dejinta / soo dejinta durdurrada.
Dhibaatadan awgeed waxaan go'aansaday inaan abuuro qoraal Bash oo asal ahaan sameeya waxyaabaha soo socda:
1. Hubi inay Gudbinta socoto oo aan durdur la hakanayn. Hadday sidaas tahay, daadka dib u daar.
2. Hubi in Firefox ay socoto. Kadibna waxay heleysaa KB / s oo la soo diray oo ay heshay oo ay ku keydineysaa feyl.
3. Haddii biraawsarku soo dajiyo ama soo dejiyo KB / s uu dhaafo tixraac kala duwan, Dejinta gudbinta / dejinta ayaa la beddelay
Tani waxay u oggolaaneysaa in marka la doonayo in la galo bog internet, markii biraawsarku diro codsiga, faylka gudbinta faylkiisa la xaddido iyo marka xogta bogga la helo, soo dejintu way xadidan tahay. Tani waxay u shaqeysaa si fiican markaad marin uhesho bogag badan isla mar ahaantaana natiijooyinka runti waa lamid yihiin kuwa gudbinta naafo ah
Faa'iidada weyn ayaa ah inay si buuxda otomaatig u tahay oo aan u baahnayn faragelinteyda.
In kasta oo loo isticmaali karo in lagu xakameeyo isticmaalka baaxadda ballaadhan ee codsi kasta, xilligan la joogo waxaa loo qoray oo keliya in lagu xalliyo dhibaato gaar ah. Laakiin ma aha wax aad u adag in wax laga beddelo.
Si ay si sax ah ugu shaqeyso waxaa lagama maarmaan ah in la helo arjiga «digaagga".
Xaaladdan oo kale, maadaama qoraalka uu la shaqeynayo Firefox iyo Transmission, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo barnaamijyadan, marka lagu daro "gudbinta-fog", taas oo ah waxa beddelaya durdurrada soo dejinta iyo soo dejinta. Waxaan sidoo kale ku isticmaalaa "awk" qoraalka. Waxaan u sheegay sababta oo ah ma garanayo haddii dhammaan qalabka wax lagu qoro ay ku rakiban yihiin.
Software loo isticmaalo
Liiska codsiyada uu qoraalku adeegsanayo iyo nidaamka meesha uu ka shaqeeyo.
• Gudbinta 2.03 (11030)
Waa in loo ordaa sidii xidid maxaa yeelay digaagga waxaa lala ordi karaa oo keliya isticmaalahaas, laakiin gudbinta-fog waxaa lagu fuliyaa adeegsadaha caadiga ah iyada oo loo marayo amarka isaga.
Qoraalka wuxuu adeegsanayaa amarka gudaha ee Bash dabin Taas oo ay suurtagal tahay in lagu soo celiyo culeyska gudbinta / soo dejinta qiimaha caadiga ah, marka la joojiyo iyadoo la adeegsanayo SIGINT (CTRL + c) ama calaamadaha SIGTERM.
Weli ma hubo sida loo wado bilowga iyo joojinta markaan xiro ama dib u bilaabo kumbuyuutarka. Waxaan ka fekerayay in aan fayl galiyo xiriir /etc/rc.local laakiin ma aqaano inay shaqeyn lahayd, runtiina ma fahmin sida / iwm / u shaqeeyoinit.d (Waxaan arkay qoraallo qaar ka mid ah oo halkaas yaal, xitaa qalfoofka, laakiin ma fahmin iyaga). Haddii qofna i caawin karo, aad baan u mahadcelinayaa.
Hagaag dadweynow, waa intaas. Waxaan rajaynayaa in wax ku biirintayda yar ay adiga waxtar kuu leedahay oo aad sii hagaajin karto haddaad rabto. Waan ku farxi doonaa inaan aqriyo fikradahaaga iyo talooyinkaaga iyo waliba talooyinka haddiiba ay jiraan dhibaatooyin xagga amniga ah oo feylka ku jira (Anigu ma ihi barnaamij-yaqaan, kaliya waxaan sameeyaa waxoogaa waqti ka waqti ah).
Waan ogahay in hagaajinta qaarkood ay noqon karto codsi weyn mustaqbalka, maxaa yeelay ma aqaano barnaamij kasta oo isku mid ah. Tusaale ahaan aniga ayey igu soo dhacdaa inaan ku yeelan karo muuqaal garaaf ah gudaha Daacadnimo iyo in aan dooran karno codsiyada aan dooneyno in aan mudnaanta siino adeegsiga xarig ballac ah (web browser, update manager, file transfer, iwm) iyo qiimayaasha tixraaca ee kala duwan. Haa, xoogaa waa hami, laakiin waa faa'iido badan.
Waxaad kala soo bixi kartaa qoraalka dhoobo. Aad baad ugu mahadsantahay aqriskaaga !!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Script Bash: Xakamaynta Gudbinta Xayeysiiska Gudbinta Tooska ah
Oh! Xiiso Leh 😀
Qeybta bidix ee bidix waxaad ku leedahay ikhtiyaar aad ku xaddiddo baaxadda ballaadhinta ee Gudbinta ay u isticmaasho soo dejinta iyo soo dejinta labadaba Gudbinta wax dhibaato ah kuma qabin.
Laakiin tani waa otomaatig, oo sidoo kale waxaa jira Gudbinta iyada oo aan lahayn garaaf garaaf ah sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaadan haysan shaqadan si aad u habboon.
Haa mar hore ayaan taas ogahay. Laakiin taasi waa dhab ahaan waxa aanan rabin inaan sameeyo.
Waxaan haystaa qorshe internet oo aad u liita (512KB waana tan ugu fiican aaggayga).
Qoraalkeyga, kama walwalayo inaan wax walba gacanta ku sameeyo. Ka soo qaad in aad bog ka furaysid biraawsarka isla markaana Gudbinta ay ku mashquulsan tahay dhammaan xawaaraha xawaaraha xilligaas, marka boggu wuxuu qaadanayaa muddo in la soo raro (ugu badnaan 1 ′, laakiin waa ka sii daalinaysaa). Waxaan ku dhammeeyey "firfircoonida waqtiga xaddidan" labadii daqiiqaba mar. Kani waa otomaatig ah oo ku dhow isla markiiba (wuxuu hubiyaa KB-ka loo diro oo loo helo Firefox 5-tii ilbiriqsiba)
Runtii kiiskeyga xawaarahaas internetka, waa wax fiican. Sidoo kale ma aqaano codsi kale oo kan sameeya, haddii kale ma uusan sameyn lahayn. Kuwii aan arkay kaliya waxay xaddidayaan xawaaraha ballaadhinta, laakiin si otomaatig ah uma aha.
Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay. Waad ku mahadsantahay aqrintaada!
Waan ka xumahay, waan qaldamay Iyagu ma ahan 512KB, ee waa Kbits. (Taasi waa, 1/2 "Mega"). Ugu badnaan ee aan soo dejisan karo waa 75KB / s iyo 50KB / s upload. Taasi waa marka Internetku hagaagsan yahay, haddii kale caadi waa 48 iyo 23.
Xiiso leh, waxaan u isticmaalaa qBittorrent oo waxaan u adeegsadaa badhanka xadka.
Boostada ayaa u muuqata mid fiican midabadaas 😉
Waad ku mahadsan tahay midabada. Anigu kuma lihi taas, waxay umuuqataa mid aad u dheer oo keligood ah qoraal aad u tiro badan.
Shakhsiyan, waxaan u isticmaalaa gudbinta-daemon iyo firefox oo leh tab codsi toos ah, sidaa darteed kuma socdo barnaamijyada dibedda ama ma iloobayo inaan sii wado qulqulka ama qoolleyda firfircoon (waana ka maamuli karaa taleefankayga). Si aad u bilawdo adeeg isticmaale ayaa lagu daray (tusaale: adduser –disabled-password nethogs), feyl qoraal ah oo loogu talagalay daemon ayaa laga abuuray /etc/init.d oo leh magac (ex: nethogs-daemon) ka dibna debian ahaan waa ku qor "cusboonaysiinta-rc.d nethogs-daemon defaults" si aad keligeed u bilowdo.
Faylka qoraalka ayaa sidoo kale ah qoraal gaaban, oo aad ku milmi karto qoraalkaaga.
Eeg haddii tani ku caawin karto, waxaa loo isticmaali karaa in lagu bilaabo gudbinta-daemon, waxaa loo isticmaali karaa in lagu bilaabo nethogs https://trac.transmissionbt.com/wiki/Scripts/initd
Aan aragno haddii aan fahmay: kani waa in lagu bilaabo Gudbinta bilowgiisa oo aan joojiyo markii la xidhayo ama dib loo bilaabayo. Taasna wax dhibaato ah kuma qabo tan iyo markii ay had iyo jeer keligeed bilaabato oo ay bilaabato soo dejinta (waxaan ku daray codsiyada bilowga ah ee Xfce).
Dhibaatadaydu waxay tahay haddii aan dhigo qoraalka rc.local ama init.d ma garanayo sida kumbuyuutarku u joojiyo qoraalka. Taasi waa, sida iska cad marka la xidhayo / dib loo bilaabayo kombuyuutarka, dhammaan howlaha waa la joojiyaa (oo iyaga la socda Gudbinta iyo Nethogs sidoo kale) laakiin ma ogi waxa ku dhici doona qoraalkeyga.
Oo maxay taasi ii dhibaysaa? Qoraalku wuxuu abuuraa fayl / tmp wuxuuna xakameynayaa xawaaraha Gudbinta. Haddii aan ku ordo terminal oo aan si lama filaan ah u joojiyo (tusaale ahaan CTRL + c), qoraalka ka hor inta aan la xirin wuxuu soo celinayaa xawaaraha caadiga ah (haddii ay lagama maarmaan noqoto) ka dibna wuxuu joojiyaa Nethogs oo wuxuu ka tirtiraa faylka / tmp. Waxaan isku dayay inaan ka dhigo "xirfadle" intii suurtagal ah si aysan uga tagin wax faylal dabacsan ama geeddi-socod asal ah.
Wixii ku saabsan waxaad tiri, ma aanan fahmin waxa "live application tab" yahay.
Tab dalabku waa tab joogto ah, marwalba wuu furan yahay waana lagu yareeyaa Firefox http://i.imgur.com/a5i0aP3.png (menu macnaha guud ee tab, guji «dhaji tab»). Markay daemonsku diraan calaamadda TERM, waxay sugaan xoogaa, illaa markay kabaxaan, oo keydiyaan xogtooda. Ogsoonow in khadadka aan horay u bixiyay markii aan ka baxayay qoraalka uu ugu yeerayo bilow-joogsi-daemon una sheegayo gudbinta inay joojiso, halkaas waxaad ku dhajin kartaa "killall nethogs" iyo waxa ku jira StopScript. Qoraalka qoraalka ah ee kiiskan waa inaad ugu yeerto asal ahaan halkii aad ka isticmaali lahayd isticmaale gaar ah, maadaama ay u baahan tahay mudnaan.
Waa hagaag mahadsanid caarada. Isla marka aan helo waqti ayaan isku dayi doonaa!
weyn, Waxaan la kulmay dhibaatadan tan iyo xitaa haddii aad leedahay xiriir dhakhso leh waxaa lagugu qasbay inaad xaddido gudbinta intaad rabto inaad daalacato oo sidaasna "waqti" lumiso.
Waxaan isku dayi doonaa markaan awoodo. Salaan iyo mahadsanid !!
Mahadsanid adiga! Waxaan rajeyneyaa inay tani ku caawin karto!
Mar labaad waad salaaman tihiin Joaquin. Waxaan arkaa inaad daryeesho inaad ka jawaabto dhammaan faallooyinka sidaa darteed waan ka faa'iideysan doonaa taas waxaanan ku weydiin doonaa dhowr su'aalood oo rookie ah.
Marka hore, sideen ku ogaadaa haddii aan rakibo qoraalka "awk"? Waxaan isticmaalaa Debian 7.2.
Marka labaad, ma garanayo waxa aan ku sameeyo koodhka dhejiska. Waa inaan qabsadaa tifaftire qoraal ah oo aan u kaydiyaa fayl la yiraahdo "bandwidth-controller.sh" ka dibna aan u ordo sida "./band-width-control.sh". Tani waa qaybtii aan aad ugu lumay.
Seddexaad: Markaad dhahdo u wad asal ahaan, ma loo baahan yahay in laga beddelo isticmaale ilaa xidid mise sudo ma tahay?
Haddii aad hayso wax akhris ah oo aad igula taliso mowduuca, waan ku qanacsanahay.
Taasi waa sababta aan had iyo jeer u tirtiro Gudbinta oo aan u rakibo 'Deluge'. Hagaag, taas iyo wax yar oo dheeraad ah oo daadku i siiyo oo aan kan kale keenin.
Haye, ma ogi daad Dhibaatadayda ugu weyni waa adeegga internetka. Tan waxaan ugu tuujinayaa si buuxda.
Salaan bandwidth-kayga sidoo kale wuu xadidan yahay sidaa darteed waxaan isku dayay qoraalkan. Laakiin ma shaqeyneyso. qaladku wuxuu umuuqdaa inuu kujiro taliska nethogs -t. waxay soo celinaysaa khaladka "Sugitaanka baakadka ugu horeeya inuu yimaado (eeg sourceforge.net bug 1019381)" waxaanan isku dayay reexaanta, archlinux iyo waxba. Muxuu amarkaas u maleynayaa inuu soo laabanayo? Waxaan u maleynayaa inaan ku daabaco qoraal cad bandwidth-ka uu adeegsado codsi kasta. Ma taqaan barnaamij kale oo kuu oggolaanaya inaad dhageysato shabakadda?
Ku jawaab panda
Taasi waa cillad Nethogs ah. Way ii muuqataa aniga sidoo kale, laakiin si kastaba way u shaqaysaa.
Maxay Nethogs sameysaa waxay muujineysaa geeddi-socodka isticmaalka baaxadda ugu badan, waqtiga dhabta ah. Qoraalka, wax soo saarkiisa waxaa lagu keydiyaa feyl qoraal ah "net.list", si markaa mar dambe loo sifeeyo.
Qoraalku wuxuu kaliya la shaqeeyaa Gudbinta (macmiilka BitTorrent) iyo Firefox (shabakadda internetka). Waxa ay sameyso ayaa xadidaya baaxada gudbinta gudbinta marka Firefox ay xareyso bog. Waxaad u baahan tahay inaad rakibo: Nethogs, Transmission, Transmission-remote iyo Firefox.
Dhammaantood waxaa lagu sharaxay boostada, markaa ma aqaano waxa dhibaatadaadu tahay.
PS: Fadlan si sax ah wax u qor oo u hagaaji higgaaddaada. Waa faallo, ma aha farriin qoraal ah.
qoraalka aniga ma shaqeynayo. daabacaa fariinta qaladka ah marar badan. ku ordo "nethogs -t" terminal si aad u aragto waxa ay qabato laakiin waxba ma daabacdo, waa qaladka. kumbuyuutarkeyga ayaan shaqeyneyn. Waxaan qiyaasayaa inay tahay inay daabacdo wax la mid ah waxa ay daabacaan markay socdaan bilaa -t, oo muujinaya hababka iyo xawaaraha. laakiin xaaladdayda midkoodna ma daabacdo. distoorkee ayaad u isticmaashay inaad ku horumariso qoraalka?
Haddii aad si dhow u fiirsato, boostada waxaa ku jira dhammaan softiweerkii la adeegsaday iyo noocyadiisa. Ma garanayo sababta qaladka, laakiin waxay ila muuqataa mar kasta oo "nethogs -t" la wado. Qoraalka wuxuu dhacayaa 2-dii kasta ″.
Waxay noqon kartaa in markii aad socoto nethogs, aysan jirin wax adeegsi ah oo loo adeegsado shabakadda sidaa darteedna aadan helin wax soo saar ah.
Qoraalku waa inuu ahaadaa mid asal ah maxaa yeelay nethogs wuxuu u baahan yahay adeegsadahaas inuu shaqeeyo.
hada waxaan xasuustay wax muhiim ah waana ogahay sababta aysan adiga kuugu shaqeynaynin:
WAA INAAD Tifaftirto qoraalka oo aad bedesho magaca isticmaalaha caadiga ah. Qoraalka waxaa loo yaqaan "joaquin". Waa inaad u badashaa magaca isticmaalahaaga.
Waan ka xumahay taas ma aanan ogaan, waxay ahayd inaan magaca ku beddelo doorsoome. Shaygu waa inaanan ka fikirin inaan ka dhigo mid guud, waxaan kaliya rabay inaan ku tuso si aad u aragto qofkastoo rabaana uu helo fikradaha sida loo sameeyo. Uma aanan samayn ujeedo ah inay ka shaqeyn doonto qalab kasta, taasi waxay qaadataa waqti mana garanayo sida wax loo sameeyo, waxyaabaha qaar aniga ayaa igu dhaca.
Nasiib wacan, wax walboo markale weydii. Oo fadlan akhri boostada iyo faallooyinka qoraalka markale.
Hello Joaquín, ii sheeg waxyaabaha soo socda:
gudbinta-fog: (http://localhost:9091/transmission/rpc/) Waan kuxiran kari waayey serverka
ioctl wuu kufashilmay inta la aasaasayay IP maxalliga ah qalabka loo xushay eth0. Waxaad ku qeexi kartaa qalabka khadka taliska.
wax fikrado ah ?? mahadsanid!
Iga raali noqo laakiin fikrad ma haysto 😀
Wixii aan ka fahmay qaladku wuxuu leeyahay, waa dhibaato ioctl, laakiin ma aqaano waxa ay tahay.
Waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad joojiso qoraalka oo aad aragto haddii gudbinta-fog ay la shaqeyso qaar ka mid ah xulashooyinkeeda (akhri boggeeda nin "amarka" ninka).
Gawaarida kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'NANO'